China Sensor USB Manufacturer - Nkwupụta Okwu Ihe Nleba Anya nke China - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > USB > Eriri mmetụta
Ọdụ ọsọ sensọ
anyị na-enye eriri igwe mmetụta dị elu yana ULTUV SGS asambodo. anyị raara onwe anyị nye USB na waya rụpụta ọtụtụ afọ, ekpuchi ọtụtụ nke Europe na America ahịa. Anyị na-atụ anya na ị ga-abụ onye gị na ya ga-ebi ogologo oge na china. Igwe ihe mmetụta ngwa ngwa 1.Product Introduction of Speed ​​sensor cable Lo ......
Okpomọkụ mmetụta USB
Anyị na-enye ihe mmetụta eriri igwe dị elu yana UL TUV SGS asambodo. Anyị raara onwe anyị nye eriri na waya rụpụta ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ọtụtụ Europe na ahịa America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga - ebi ogologo oge na china.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Eriri mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Eriri mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.